Mozilla ichapa mubairo yakavhurwa sosi mapurojekiti ne500K madhora | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla Yakagara ichibatanidzwa nenhoroondo yemahara uye yakavhurwa sosi software, kubvira payakabuda kubva kunhengo dzeakafa Netscape. Kana muna 1998 kodhi yeakakurumbira uye akabudirira webhu bhurawuza Netscape Navigator yakaburitswa mushanduro yayo 4.x uye kubva pairi chirongwa cheMozilla chakamuka kusvika zvino, zvakawanda zvachinja nekufambira mberi. Kubva pakubudirira kwechigadzirwa chayo, Mozilla Firefox, zvimwe zvakaitwa uye zvirongwa zvakawedzerwa kukambani.
Zvino kubva ku Mozilla Foundation ) Muenzaniso weiyi ndiwo mubairo we $ 2003 kuvhura sosi mapurojekiti ayo hwaro achapa kuvabatsira kuvapa mari uye kukwezva vamwe vanogadzira. Nenheyo idzi dzese, chokwadi ndechekuti huwandu hwemapurojekiti matsva uye anonakidza ari kusimudzirwa uye kutsigirwa. Mozilla iri kukohwa mari yakakwana Nekuda kwekubudirira kwavo neyakavhurika sosi yavo uye matekinoroji ewebhu, uye nekutenda kumari yakakwenenzverwa, ivo zvino vachapa iyo mari ine muto yatakambokurukura mundima yapfuura kune mitsva yakavhurwa sosi mapurojekiti. Kunyanya nemubairo unosvika kumadhora mazana mashanu nemakumi mashanu nepfumbamwe.
Mamwe a mapurojekiti Tiri kutaura nezve, semuenzaniso, Ushahidi (chirongwa chekugovana nekuita kuunganidzwa kweruzivo rwemuno), RiseUp (kuvandudza maturusi edziviriro edhijitari evamiriri), Phaser (injini yemifananidzo yemitambo yemavhidhiyo yakavakirwa paHTML5), nezvimwe. chirongwa Mozilla Open Source Rutsigiro, inozivikanwawo seMOSS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mozilla ichapa $ 500K kuvhura sosi mapurojekiti